कहाँ राख्छन् बिल गेट्सले सम्पत्ति ? कहाँ कहाँ खर्चन्छन् पैसा ? - Nepalgunj Business
कहाँ राख्छन् बिल गेट्सले सम्पत्ति ? कहाँ कहाँ खर्चन्छन् पैसा ?
विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरु अरबौँ खरबौँको सम्पत्ति कहाँ राख्छन् होला ? यो सबैको कौतुहलताको विषय हो । धनाढ्यहरुको सूचिको टपमा थुप्रै वर्ष रहेर अहिले दोस्रो स्थानमा झरेका बिल गेट्सँग ९० विलियन अमेरिकी डलर सम्पत्ति छ । उनको कमाईको मूख्य स्रोत माइक्रोसफ्ट कम्पनी हो । उनी यस कम्पनीका सहसंस्थापक हुन् । २०१४ मा कम्पनीको अध्यक्षबाट राजीनामा नदिँदासम्म उनी त्यहाँका सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत सेयरधनी थिए । अहिले पनि उनीसँग माइक्रोसफ्ट कम्पनी किन्न पुग्ने सम्पत्ति छ ।
संसारकै दोस्रो धनी बिल गेट्स आफ्नो सम्पत्ति कहाँ राख्छन् त ?
बिल गेट्सको कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत माइक्रोसफ्ट कम्पनीमा छ । यसबाहेक उनले क्यासकेड इन्भेष्टमेन्ट्समार्फत थुप्रै कम्पनी र विजनेसमा लगानी गरेका छन् । क्यासकेटमार्फत उनले रिपब्लिक सर्भिसेज नामक फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीमा दुई विलियन डलरको हाराहारीमा लगानी गरेका छन् । नेनल कार डिलरसिप फ्रान्चाइज अटोनेशनमा उनको ६८० मिलियन डलर लगानी छ । त्यस्तै, सरसफाइसम्बन्धी सामान बनाउने इकोल्याबमा पनि उनको लगानी छ । त्यस्तै, म्याकडोनाल्ड लगायतका चार वटा सिजन्स होटलमा उनको लगानी छ ।
उनले हालै बीजीसी ३ नामक थिंक ट्याङ्क एण्ड भेन्ट्युर क्यापिटल फर्मको स्थापना गरेका छन्, जसले विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी काम गर्दछ । यसबाहेक, उनी डिजिटल इमेज लाइसेन्सिङ एण्ड राइटक कम्पनी कर्बिस, न्युक्लियर रियाक्टर कम्पनी टेरापावर र रिसर्चर र साइन्टिस्टका लागि रिसर्च गेट नामक सामाजिक संजालमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेका छन् ।
प्राइभेट आइल्याण्ड लगायतका रियलस्टेटमा पनि बिल गेट्स लगानी गर्छन् । लेक वासिङटनमा उनको ६६०० वर्गफिटमा फैलिएको प्रविधिमैत्री ह्बलबमग द्द।ण् छ, जहाँ ६ वटा भान्सा, २४ वटा बाथरुम र ६ वटा फायरप्लेसेज रहेका छन् । यहाँ, लाइट, म्युजिक लगायत सबै कुरा अटोमेटिक छन् । यसको मूल्य १५० मिलियन डलरभन्दा बढी पर्न आउँछ ।
२०१३ मा बिल गेट्सले फ्लोरिडामा ८.७ मिलियन डलरको बंगला किनेका थिए । त्यस्तै, सेन्ट्रल अमेरिकामा रहेको ग्राण्ड बग के नामक ३१४ हेक्टर मा फैलिएको आइल्याण्ड पनि उनकै रहेको बताइन्छ । यो आइल्याण्ड अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो आइल्याण्ड हो । २५ मिलियनभन्दा बढी खर्चेर उनले त्यो आइल्याण्ड किनेको बताइन्छ ।
प्लेन र अटोमोबाइल
बिल गेट्सको बम्बाडियर बीडी ७००, ग्लोबल एक्सप्रेस नामक एउटा निजी प्लेन छ । अल्ट्रा लङ रेन्जको उक्त जेटको मूल्य ४५ मिलियन डलरको हाराहारी रहेको छ । नेटजेट्सको मेम्बर रहेका उनीसँग बोइङ बिजनेस जेटको सेयर पनि रहेको छ । यो जेट प्रायः उनी आफ्नो फाउन्डेसनको कामको लागि मात्रै प्रयोग गर्छ्रन् । त्यस्तै, अटोमोबाइल्समा पनि उनको रुचि रहेको छ । थुप्रै कारहरु भए तापनि उनी नर्मल मर्सिडिजमा आफैँ ड्राइभ गरी यात्रा गर्न रुचाउँछन् ।
संकलन गर्न लायक कुराहरु खरिद गरेर राख्ने उनको सौख रहेको छ । १९९४ मा उनले लियो नार्दो दा भिन्चीको म्यानुस्क्रिप्ट ३०.८ मिलियन डलरमा किनेका थिए । कोडेक्स लिसेस्टर नामको उक्त म्यानुस्क्रिप्टमा भिन्चीका आविष्कारहरुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक, पेन्टिङ लगायतका सजावटका सामानहरु उनले अक्सनबाट किन्ने गरेका छन् ।
समाजसेवी काममा पनि उनको हात अगाडी रहेको छ । बिल एण्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन संसारकै ठूलो फाउन्डेसन बन्न सफल भएको छ । यसबाहेक, उनले थुप्रै युवाहरुलाई समाजसेवी काम गर्न, अरुलाई सहयोग गर्न र दान गर्न उत्प्रेरित गरेका छन् । Bankingkhabarबाट
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, असार ६, २०७६ 7:18:43 PM